“အချိန်မီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးဟာ အရေအတွက်အားဖြင့် ကျစ်လစ်သလောက် သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တာသွားမှုက ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်။ ကျွန်တော် အဝေးကနေ အချိန်မီရုံကလေး ပြုခဲ့တဲ့အကျိုးတစ်ခုကြောင့် အဖွားရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ အနားမှာ မရှိခဲ့ပေမယ့် အကောင်းဆုံးလေးတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဖြေသာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဟာ အဖေဖက်က အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ အိမ်မှာပဲ အတူနေခဲ့တာမို့ ၂၄ယောက်သော မြေးတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ ဖိုးဖွားတွေနဲ့ အကြာဆုံးနေခဲ့တဲ့ မြေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးကွယ်လွန်သွားတာတော့ အနှစ်နှစ်ဆယ်နီးပါးကြာခဲ့ပါပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ပါ။ အဖိုးရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ရောက်တိုင်း အဖွားက အလှူအတန်းလုပ်နေကြပါ။ ဆွမ်းကျွေးတရားနာ မလုပ်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဆိုရင် ဘုရားတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လှူလေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ဝင်ငွေလေးနဲ့ ရပ်တည်နိုင်တော့ မိဘတွေဆီကို ငွေမှန်မှန်ပို့ပါတယ်။ လူကြုံရှိရင်တော့ ပစ္စည်းလေးဘာလေး ထည့်ပေးပါတယ်။ အဖွားတွေအတွက်ယောဂီရောင် သဘက်လေးတွေပဲ ထည့်ပေးဖူးပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက်ကလည်း ဝယ်ရခက်သား။ အဲဒါကြောင့် အဖွားနှစ်ယောက်ကိုတော့ ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အခါမှ သီးသန့်ကန်တော့မယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးသားပါ။ မတ်လဆန်းလို့ အဖိုးနှစ်ပတ်လည်နေ့ မတိုင်ခင် ဒီမှာ အတူရောက်နေတဲ့ အကိုဝမ်းကွဲက အဖိုးနှစ်ပတ်လည်မှာ အဖွားလှူချင်တာလေး လှူနိုင်အောင် နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ငွေလေးပို့ပေးရအောင်လို့ ဆိုတာနဲ့ ပို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ (အဲဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော့်အကိုကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်)။ နောက်တစ်ပတ်လောက်နေလို့ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တော့ အဖွား ရုတ်တရက် လေဖြတ်သွားလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း၊ အခုနည်းနည်းသက်သာလို့ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အဖေတို့မောင်နှမကိုးယောက် တိုင်ပင်ပြီး ရန်ကုန်ကို ခေါ်သွားပြီး ကုသတာ အချိန်တိုနဲ့ ပိုမိုထိရောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး SSC ဆေးခန်းမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ၂ရက်တစ်ခါ ၃ရက်တစ်ခါလောက်ကို အခြေအနေလှမ်းမေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာက ဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြသပြီးလို့ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးရင်တော့ အရှင်းမပျောက်သေးတောင် အတော်ပြန်သက်သာမယ်ထင်တာ။ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ မနက်မှာ ရန်ကုန်ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့ အဖွားကို လက်လျှော့လိုက်ရပြီတဲ့။ ဆေးတွေသွင်းထားတာ ကျောက်ကပ်က ခြောက်သွားတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး အဖွားက သွေးတိုးလည်းရှိတော့ ဦးနှောက်ထဲက သွေးကြောတွေက မခံနိုင်ဘဲ ပေါက်ကုန်တယ်တဲ့။ ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေတော့ ကျွန်တော်နားမလည်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ အဖွားကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးဆုံးတဲ့ရက်နဲ့ တစ်ရက်သာကြားမှာ ခြားပါတယ်။ အမေဖက်က အဖိုးကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်လေးဆယ်ကျော် မတ်လ ၂၇ ရက်မှာပဲ ဆုံးတာပါပဲ။ ကျွန်တော်အဖို့တော့ မတ်လနွေဟာ အပူကိုသာမက အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ အေးမြတဲ့အရိပ်အာဝါသတွေကိုပါ ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လာသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ဆီက ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာ သိရတော့ အဖွားခမျာ ဝမ်းတွေသာလို့ အိမ်လာတဲ့သူတိုင်း ပြောရှာတယ်။ တကယ်တော့ အဖွားဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြည့်စုံမှုရှိပြီးသားပါ။ အဖွားဝမ်းသာတာ ငွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ မြေးတွေရဲ့ သိတတ်မှုကရတဲ့ ပီတိကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော့်အမေကိုပြောတယ်တဲ့။ မတ်လ၂၇ ရက်နေ့ကျရင် ကောင်းမှုတော်ဘုရားသွားပြီး လှူမယ်။ အပြန်ကျရင် ကန်တော်ကြီးအနောက်ဖက်မှာ ဖွင့်တော့မယ့် ဟော်တယ်ကြီးကိုလည်း လှည့်ကြည့်ရအောင်လို့ ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ အခုတော့ ၂၇ရက်နေ့မှာ အဖွားက ရန်ကုန်က ဆေးရုံပေါ်မှာ ရောက်နေခဲ့တယ်။ အမေက ညီမလေးရယ် တူတွေတူမတွေရယ်နဲ့ အဲဒီရက် မတိုင်ခင်ကတည်းက ကောင်းမှုတော်ဘုရားမှာ သွားလှူပြီးခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီအချိန်က ဆေးရုံပေါ်မှာ သတိကောင်းကောင်းရနေသေးတဲ့အတွက် အဖေက လှူပြီးကြောင်း ပြောပြနိုင်လိုက်လို့ အဖွား သာဓုကောင်းကောင်း ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ အဖွားရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သာဓုခေါ်လိုက်ရတဲ့ အလှူအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်မီကုသိုလ်လေးဟာ တွေးမိတိုင်း ပီတိမျက်ရည်ဝဲရပါတယ်။ အဖွားကို တောင်ငူမှာ သဂြိုလ်တဲ့နေ့ဟာ ကျွန်တော်ဒီရောက်တာ တစ်နှစ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့ပါ။ ကျွန်တော်ရုံးကခွင့်ယူပြီး တိုပိုင်းရိုးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မေတ္တာပို့ အမျှဝေနေခဲ့ပါတယ်။ ဟော်တယ်အသစ်ကြီးကို ကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရပေမယ့် အဖွားရဲ့နောက်ဆုံးခရီး သွားရာလမ်းက ဟော်တယ်ဘေးနားက ဖြတ်သွားရတာလေ။
Posted by Taungoo at 1:00 PM
အတူတူရှိနေတုန်း လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ လုပ်ပေးခဲ့နိုင်တာ ၀မ်းသာစရာပါ ။ တချို့ တွေက စိတ်ထဲကလုပ်ပေးချင်ပေမဲ့ အခြေအနေမပေးဘူး။ တချို့ ကြတော့ အချိန်မီ သတိမ၀င်လာတတ်ဘူး။
မောင်လေးတောင်ငူရေ မင်းလုပ်ပေးခဲ့တာ ၀မ်းသာစရာပါ။
သာဓု သုံးကြိမ် သေသေချာချာ ခေါ်သွားပါတယ်။ ဒီလို ကုသိုလ်မျိုး လုပ်ဖို့ အသိ၊ အခြေအနေ နဲ့ စေတနာ အားလုံး ဆုံမှ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ ထင်သလောက် လွယ်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလေ။
သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်သွားပါကြောင်း . . .
မိဘ အဖိုး အဘွားတွေကို မသေခင်ကျေးဇူးဆပ်နိုင်
အမလည်း အခုအချိန်အထိ မိဘတွေကျေးဇူး၊နှစ်ဖက်
မိဘကျေးဇူးပေါ့နော် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆပ်နေတာမို့
ထပ်တူပဲ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ် မောင်လေး ရေ။
လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ လုပ်ပေးခဲ့တာ ၀မ်းသာစရာပါ။
Well Done for your great jobs!!
ကိုတောင်ငူရေ… မရှိတော့မှ မငိုနဲ့ရှိနေတုန်းလုပ်ကျွေးဆိုတဲ့စကားလေးက သိပ်မှန်ပါတယ်… ကျွန်မတို့သိပ်ချစ်ရတဲ့ ဆရာကြီးလေဖြတ်တော့ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်း ဆရာကြီးအတွက် ဆေးဖိုးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်… ဆရာကြီးဆုံးသွားတော့ အဲဒီအလှူလေး အချိန်မီလိုက်တဲ့ အတွက် ရင်ထဲနဲနဲ ဖြေသာခဲ့ပါတယ်… အခွင့်ရတုန်း လူကြီးမိဘ ဆရာသမားကို လုပ်ကျွေးပြုစုဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇုးပါ…